Waa Kuwee Afarta nin ee awoodda ciidan leh kana tirsan garabka mucaaradka Somalia. | HADHWADAAG NEWS
Home Maqaalo Waa Kuwee Afarta nin ee awoodda ciidan leh kana tirsan garabka mucaaradka...
Waa Kuwee Afarta nin ee awoodda ciidan leh kana tirsan garabka mucaaradka Somalia.
Muqdisho(HNN):-Iyadoo isbuucyadii lasoo dhaafayba ay jirtay cabsi ayaa shalay waxaa magaalada caasimadda ah ka dhacay dagaallo u dhaxeeyay ciidamada dowladda iyo xoogag kasoo hor jeeda oo taabacsan xubnaha mucaaradka.
Previous articleGudoomiye Cabdi Xaashi oo war kasoo saaray Xiisadda ka taagan Muqdisho, Kana Soo horjeestay Guddi farmaajo Dhaariyey.
Next articleWareysi: Qoor Qoor oo faah-faahin ka bixiyey go’aankii ay ku diideen mudo kororsiga.